I-Roborock Dya, isicoci sevacuum esimanzi nesomile esisezingeni eliphezulu kakhulu | Izindaba Zegajethi
URoborock Dya, i-vacuum ephethwe ngesandla emanzi kakhulu futhi eyomile
U-Roborock uye wahola ekusungulweni kwezobuchwepheshe emkhakheni wokuhlanza okuhlakaniphile, muva nje sihlaziye i-Roborock S7 kanye neyakho indawo yokulahla udoti, futhi manje bashintsha imikhiqizo ukuze bathuthukise lokho osekuvele kukhona, baya ngisho nasezindaweni lapho okwamanje ezinye izinhlobo zibonakala zihamba phambili.
I-Roborock iphendulela phansi imakethe yevacuum ephathwa ngesandla nge-Dyad, imodeli esebenzayo emanzi neyomile. Ake sithole izici zalo mkhiqizo omusha we-Roborock oyingqayizivele.
Lokhu Roborock Dyad ibona amabala kusetshenziswa isistimu yokuhlanza eguquguqukayo, ngaleyo ndlela ikhuculule, ikhuhle futhi yomise, ikhiphe okuqinile namanzi angcolile ethangini elingu-620 ml. Ikhiphela amanzi ahlanzekile phansi ngenkathi amarola ayo esebenza ukukhipha ukungcola.
Inamarola amabili angemuva emachosheni kanjalo amamotho amabili ngokwehlukana akwazi ukwenza kusebenze ama-roller amathathu esewonke, uhlelo oluhlukile emakethe.
“Ngaphezu kokuthanda kwethu ubuchwepheshe, kwaRoborock sichaza okwethu
uthando lokusungula izinto ezintsha zobuchwepheshe. Ngakho-ke, i-Dyad nayo ingumkhiqizo wamaphayona
esigabeni sayo. Ngenxa yohlelo lwe-DyadPower, i-Dyad ukuphela kwe-vacuum cleaner
imanzi futhi yomile, izinjini zazo ezimbili zishayela kuphela uhlelo lweziningana
ama-roller, ngaleyo ndlela anikeze ukuhlanza okuphumelelayo nokukhipha ukungcola ku-a
edlule, futhi emaphethelweni. Sidale lo mkhiqizo wezinhloso eziningi
ekwazi ukukhipha emanzini angcolile iye kokungcola okugqitshiwe, isebenzisa a
uhlelo olusha lokuhlanza - Richard Chang, CEO we Roborock.
Ngaphezu kwalokho, ine- isistimu yokuzihlanza ngokuzenzakalelayo ngokucindezela inkinobho, ephelezelwa isibonisi se-LED lokho kuzosivumela ukuthi sihlonze izindawo zaphansi ezigxilisa ukungcola okuningi, kanye nesistimu yokuxwayisa ngezwi esevele ihlanganiswe kweminye imikhiqizo ye-Roborock. Ngendlela efanayo, Ibhethri layo elingu-5000 mAh lizovumela imizuzu engu-35 yokuhlanza okungaphazamiseki noma kufika kumamitha-skwele angama-280.
URoborck Dyad uzotholakala e-Europe ngoNovemba 11 ngentengo ephakanyisiwe yama-euro angama-449 ezitolo ezinkulu njenge-AliExpress.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » URoborock Dya, i-vacuum ephethwe ngesandla emanzi kakhulu futhi eyomile
I-Chopbox iyibhodi lokusika elihlakaniphile le-5in1, ungasisiza? [Ukuhlaziya]
IPhilips Momentum 278M1R, ukuhlaziywa okujulile